ဉာဏ်ကောင်း၊ပညာတတ်၊မောက်မာပြီး အိမ်ထောင် ၂ ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ မိန်းမ ၁ ယောက်ရဲ့ ကျေနပ်သွားတဲ့ သေနည်း…. – Myanmar News
Cele / Knowledge
ဉာဏ်ကောင်း၊ပညာတတ်၊မောက်မာပြီး အိမ်ထောင် ၂ ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ မိန်းမ ၁ ယောက်ရဲ့ ကျေနပ်သွားတဲ့ သေနည်း….
March 19, 2019 - by adminpph - LeaveaComment
ဉာဏ်လည်းကောင်း ပညာလည်းတတ် မောက်မာပြီး အိမ်ထောင် ၂ ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ မိန်းမ ၁ ယောက်ရဲ့ ကျေနပ်သွားတဲ့ သေနည်း
တစ်ခါက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာဉာဏ်လည်း ကောင်းတယ်ပညာလည်း တော်တော်တတ်တယ်အကျဉ်းပြောရရင်သူ့မှာ အိမ်ထောင်နှစ်ဆက် ရှိခဲ့တယ် အိမ်ထောင်ကို ပိုက်ဆံကြည့်ပြီး ပြုခဲ့တော့ အဲဒီအိမ်ထောင် နှစ်ဆက်လုံးဟာ ကွဲသွားခဲ့တယ် သားသမီးတွေလည်း ရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်ယောက်နဲ့မှ မတည့်ဘူးမောင်နှမတွေ ရှိတာလည်း ဘယ်သူနဲ့မှအဆင်မပြေခဲ့ဘူး..
သူ့လောက် မလည်တဲ့မောင်တွေ ညီမတွေ အကုန်လုံးကိုလိမ်ညာ လှည့်ဖျားပြီး မိဘအမွေတွေကိုသူ့လက်ထဲအကုန်နီးပါးရအောင် လုပ်ခဲ့တယ် သူဟာ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တယ် ပြီးတော့ ချမ်းသာတယ် နောက်တော့ သူ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်ရတဲ့အခါ အစာအိမ်ကင်ဆာတဲ့ ခွဲလိုက်တယ်
မပျောက်ဘူးအသည်းရောဂါပါ ထပ်ဖြစ်တယ် ဘာမှလည်း လုပ်လို့မရတော့ဘူး ရောဂါရှိနေတဲ့ကြားက မြင်သမျှကိုအော်တယ် ငေါက်တယ် ငွေနဲ့ ဖြေရှင်းစေခိုင်းနေတုန်း အဲဒီမှာ ဆွေမျိုးမကင်းတဲ့ ဆရာဝန်မလေးရယ် သူ့အတွက် ငှားပေးတဲ့ စပါယ်ရှယ်နပ်စ်မလေးရယ် ပြုစုကြတယ် တစ်ခုရှိတာက နှစ်ယောက်စလုံးက တရားဘာဝနာကိစ္စမှာ ဝါသနာပါကြတာ..
နပ်စ်မလေးကို အမြဲအော်ငေါက်ပေမယ့်သူ့အပေါ် အရမ်းကို သည်းခံရှာပါတယ် သူ စိတ်နည်းနည်း ကြည်ပြီထင်ရင်တရားအကြောင်းလေးတွေ ပြောပြောပြတယ် တိပ်ခွေဖွင့်ပြမယ်လုပ်တော့…ဘာအခွေလည်း တရားခွေပါအန်တီ ဆိုရင် သိပ်ပျင်းစရာကောင်းတာပဲ လို့ပြောလေ့ရှိတယ် ….
ရံဖန်ရံခါကြတော့လည်း ဖွင့် ဖွင့် လို့ပြန်ပြောတယ် တစ်နေ့ ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ ဘဝဆိုတာ ကျောင်း ဆိုတဲ့ အခွေနဲ့တရားကိုနာမိပြီး သူတော်တော်စဉ်းစားလာတယ် ဘာမှတော့မပြောဘူး နောက်နေ့ နားထောင်တယ် တဖြည်းဖြည်းစိတ်ပြောင်းလာတယ်..
ဆရာမလေးဟာ အားတက်ပြီး အခွေတွေထပ်ယူလာပေးတယ် ခွင့်လွှတ်ပါတယ် ဆိုတဲ့တရားခွေ အဲဒီအခွေကို သူသိပ်နားမထောင်ချင်ဘူး သူဟာဘာကိုမှ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး တော်တော်ကြာနေမှ ဖွင့်ကြည့်လိုက်စမ်း ဆိုပြီးပြောလာတယ်….
တရားထဲမှာပါတာက ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လွတ်လပ်အောင်လုပ်တာ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးသရွေ့ ကိုယ့်စိတ်က မလွတ်လပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ပါတယ် နားထောင်ရင်း သူနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်လာတယ်ရောဂါကြောင့် သူကြာကြာမနေရတော့ဘူးဆိုတာကိုသူသိလာပုံရပါတယ် ။
နောက်တော့ သဘောထားကြီးပါတယ် ဆိုတဲ့တရားခွေ သူအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ အရင်လောက် မအော်မငေါက်တော့ပြုံးရွှင်လာတယ် ကောင်းမွန်လာတယ်မေတ္တာလည်းထားနိုင်လာတယ်..မောင်တွေညီမတွေကိုပြန်တွေ့ချင်လာတယ် အခေါ်ခိုင်းတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်ကခံထားရသူတွေက သေခန်းဖြတ်ထားကြပြီ အတွေ့မခံကြတော့ဘူး အမျိုးမကင်းတဲ့ ဆရာဝန်မလေးကစေ့စပ်ပေးရှာတယ်တောင်းတောင်းပန်ပန်အကြိမ်ကြိမ်ပြောမှ မလာချင်လာချင်လာကြတော့တယ် လာကြတော့ သူပြေပြေလည်လည်ပြောပါတယ် ။
သူမှားခဲ့တာတွေရှိရင် သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတဲ့ သူနာထားတဲ့ တရားခွေထဲမှာ ဆရာတော်က သေခါနီးမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မကျေမနပ်ဖြစ်နေရတဲ့သူမရှိချင်ဘူး ခွင့်လွှတ်ပါတယ် ကိုယ်မှားခဲ့ရင်လည် ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ သူတို့မှားခဲ့လို့မကျေနပ်တာရှိရင်လည်း အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲသေချင်ပါတယ် ”း လို့ပါတယ်..
အဲဒါလေးကို သူ့စိတ်ထဲမှာသိပ်ခံစားရတယ် သူလည်းခွင့်လွှတ်တယ် သူ့ကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပါဆိုတာကိုသူသိပ်လိုချင်နေတယ် တဖြည်းဖြည်း တစ်ယောက်ချင်းလာ တလှည့်စီလာ၊ စုလာ ၊ လာရင်းကနေမောင်နှမတွေ ပြန်တည့်ကြတယ် ဒီမှာတင် ဘယ်သူမှမသိအောင် တိတ်တိတ် ရှေ့နေတွေခေါ်ပြီး သေတမ်းစာရေးတော့တယ်။
အဝေးနိုင်ငံက သားသမီးတွေကိုခေါ်တယ် ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ အမွေတွေပေးလိုက်တယ်။ အရင်ကမတရားယူထားတဲ့မိဘအမွေတွေကို မောင်နှမတွေကို အကုန်ပြန်ပေးတယ် ပေးမယ်ပြောပြီးမှပြေလည်တာမဟုတ်ဘူး ပြန်ပြေလည်ပြီးမှ ပေးတာ သူ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေဟာ တော်တော်အေးချမ်းလာတယ် ။
တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လေးအတွင်းမှာ တရားလေးနာ တရားလေးအားထုတ်ရင်းစိတ်ထားတွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားပြီးကြည်ကြည်လင်လင် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပဲ သူသေသွားခဲ့တယ် ။မောင်နှမတွေဆိုသူ့သေတမ်းစာနဲ့ အမွေတွေပေးထားတာတွေတွေ့ရတော့ အကြီးအကျယ်ဝမ်းနည်းတော့တာ အရင်တုန်းကစိတ်ဆိုးခဲ့တာကိုတောင် ပြန်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ် ။
အဲဒါဘာကြောင့်လည်း တရားကြောင့် ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုဆရာတော်က နားလည်လွယ်အောင် စကားရိုးရိုးနဲ့ တဆင့်ပြန်ဟောပေးသွားတာသူမသေခင်လေးမှာ ခဏ ခဏပြောသွားတယ်..ငါ ခုလိုစိတ်မျိုးနဲ့သေရတာကျေနပ်ပါတယ် ။တသက်လုံးရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာ အခုအချိန်မှာငါ့ကို ဘာကျေနပ်မှုမှ မပေးနိုင်ဘူး ။
ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးစောစောစီးစီးကတည်းကနေနိုင်ခဲ့ရင်ဘဝဟာ ပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းမှာပါ တဲ့ဘဝကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုနေကြမလဲ…..(ဆရာတော်ဦးဇောတိက၏ အသက်ရှင်နေလျက်ဘဝသေနေသူ တရားတော်အား မှီငြမ်းပါသည်။)
ဉာဏျလညျးကောငျး ပညာလညျးတတျ မောကျမာပွီး အိမျထောငျ ၂ ဆကျရှိခဲ့တဲ့ မိနျးမ ၁ ယောကျရဲ့ ကနြေပျသှားတဲ့ သနေညျး
တဈခါက အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာဉာဏျလညျး ကောငျးတယျပညာလညျး တျောတျောတတျတယျအကဉျြးပွောရရငျသူ့မှာ အိမျထောငျနှဈဆကျ ရှိခဲ့တယျ အိမျထောငျကို ပိုကျဆံကွညျ့ပွီး ပွုခဲ့တော့ အဲဒီအိမျထောငျ နှဈဆကျလုံးဟာ ကှဲသှားခဲ့တယျ သားသမီးတှလေညျး ရှိခဲ့ပမေယျ့တဈယောကျနဲ့မှ မတညျ့ဘူးမောငျနှမတှေ ရှိတာလညျး ဘယျသူနဲ့မှအဆငျမပွခေဲ့ဘူး..
သူ့လောကျ မလညျတဲ့မောငျတှေ ညီမတှေ အကုနျလုံးကိုလိမျညာ လှညျ့ဖြားပွီး မိဘအမှတှေကေိုသူ့လကျထဲအကုနျနီးပါးရအောငျ လုပျခဲ့တယျ သူဟာ ကုမ်ပဏီလုပျငနျးတှေ လုပျတယျ ပွီးတော့ ခမျြးသာတယျ နောကျတော့ သူ အစာအိမျရောဂါဖွဈပွီး ဆေးရုံတကျရတဲ့အခါ အစာအိမျကငျဆာတဲ့ ခှဲလိုကျတယျ
မပြောကျဘူးအသညျးရောဂါပါ ထပျဖွဈတယျ ဘာမှလညျး လုပျလို့မရတော့ဘူး ရောဂါရှိနတေဲ့ကွားက မွငျသမြှကိုအျောတယျ ငေါကျတယျ ငှနေဲ့ ဖွရှေငျးစခေိုငျးနတေုနျး အဲဒီမှာ ဆှမြေိုးမကငျးတဲ့ ဆရာဝနျမလေးရယျ သူ့အတှကျ ငှားပေးတဲ့ စပါယျရှယျနပျဈမလေးရယျ ပွုစုကွတယျ တဈခုရှိတာက နှဈယောကျစလုံးက တရားဘာဝနာကိစ်စမှာ ဝါသနာပါကွတာ..
နပျဈမလေးကို အမွဲအျောငေါကျပမေယျ့သူ့အပျေါ အရမျးကို သညျးခံရှာပါတယျ သူ စိတျနညျးနညျး ကွညျပွီထငျရငျတရားအကွောငျးလေးတှေ ပွောပွောပွတယျ တိပျခှဖှေငျ့ပွမယျလုပျတော့…ဘာအခှလေညျး တရားခှပေါအနျတီ ဆိုရငျ သိပျပငျြးစရာကောငျးတာပဲ လို့ပွောလရှေိ့တယျ ….
ရံဖနျရံခါကွတော့လညျး ဖှငျ့ ဖှငျ့ လို့ပွနျပွောတယျ တဈနေ့ ဆရာတျောဦးဇောတိကရဲ့ ဘဝဆိုတာ ကြောငျး ဆိုတဲ့ အခှနေဲ့တရားကိုနာမိပွီး သူတျောတျောစဉျးစားလာတယျ ဘာမှတော့မပွောဘူး နောကျနေ့ နားထောငျတယျ တဖွညျးဖွညျးစိတျပွောငျးလာတယျ..
ဆရာမလေးဟာ အားတကျပွီး အခှတှေထေပျယူလာပေးတယျ ခှငျ့လှတျပါတယျ ဆိုတဲ့တရားခှေ အဲဒီအခှကေို သူသိပျနားမထောငျခငျြဘူး သူဟာဘာကိုမှ ခှငျ့မလှတျနိုငျဘူး တျောတျောကွာနမှေ ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျစမျး ဆိုပွီးပွောလာတယျ….
တရားထဲမှာပါတာက ခှငျ့လှတျတယျဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကို လှတျလပျအောငျလုပျတာ ခှငျ့မလှတျနိုငျသေးသရှေ့ ကိုယျ့စိတျက မလှတျလပျနိုငျဘူးဆိုတာ ပါတယျ နားထောငျရငျး သူနညျးနညျးတော့သဘောပေါကျလာတယျရောဂါကွောငျ့ သူကွာကွာမနရေတော့ဘူးဆိုတာကိုသူသိလာပုံရပါတယျ ။
နောကျတော့ သဘောထားကွီးပါတယျ ဆိုတဲ့တရားခှေ သူအမြားကွီးပွောငျးလဲသှားပွီ အရငျလောကျ မအျောမငေါကျတော့ပွုံးရှငျလာတယျ ကောငျးမှနျလာတယျမတ်ေတာလညျးထားနိုငျလာတယျ..မောငျတှညေီမတှကေိုပွနျတှခေ့ငျြလာတယျ အချေါခိုငျးတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဟိုဘကျကခံထားရသူတှကေ သခေနျးဖွတျထားကွပွီ အတှမေ့ခံကွတော့ဘူး အမြိုးမကငျးတဲ့ ဆရာဝနျမလေးကစစေ့ပျပေးရှာတယျတောငျးတောငျးပနျပနျအကွိမျကွိမျပွောမှ မလာခငျြလာခငျြလာကွတော့တယျ လာကွတော့ သူပွပွေလေညျလညျပွောပါတယျ ။
သူမှားခဲ့တာတှရှေိရငျ သူ့ကိုခှငျ့လှတျပါတဲ့ သူနာထားတဲ့ တရားခှထေဲမှာ ဆရာတျောက သခေါနီးမှာ ကိုယျကိုယျတိုငျက မကမြေနပျဖွဈနရေတဲ့သူမရှိခငျြဘူး ခှငျ့လှတျပါတယျ ကိုယျမှားခဲ့ရငျလညျ ခှငျ့လှတျလိုကျပါ သူတို့မှားခဲ့လို့မကနြေပျတာရှိရငျလညျး အားလုံးကို ခှငျ့လှတျတဲ့စိတျနဲ့ပဲသခေငျြပါတယျ ”း လို့ပါတယျ..
အဲဒါလေးကို သူ့စိတျထဲမှာသိပျခံစားရတယျ သူလညျးခှငျ့လှတျတယျ သူ့ကိုလညျး ခှငျ့လှတျပါဆိုတာကိုသူသိပျလိုခငျြနတေယျ တဖွညျးဖွညျး တဈယောကျခငျြးလာ တလှညျ့စီလာ၊ စုလာ ၊ လာရငျးကနမေောငျနှမတှေ ပွနျတညျ့ကွတယျ ဒီမှာတငျ ဘယျသူမှမသိအောငျ တိတျတိတျ ရှနေ့တှေခေျေါပွီး သတေမျးစာရေးတော့တယျ။
အဝေးနိုငျငံက သားသမီးတှကေိုချေါတယျ ပေးသငျ့ပေးထိုကျတဲ့ အမှတှေပေေးလိုကျတယျ။ အရငျကမတရားယူထားတဲ့မိဘအမှတှေကေို မောငျနှမတှကေို အကုနျပွနျပေးတယျ ပေးမယျပွောပွီးမှပွလေညျတာမဟုတျဘူး ပွနျပွလေညျပွီးမှ ပေးတာ သူ့နောကျဆုံးအခြိနျတှဟော တျောတျောအေးခမျြးလာတယျ ။
တဈနှဈကြျောကြျောလေးအတှငျးမှာ တရားလေးနာ တရားလေးအားထုတျရငျးစိတျထားတှတေဖွညျးဖွညျးပွောငျးလဲသှားပွီးကွညျကွညျလငျလငျ အေးအေးခမျြးခမျြးနဲ့ပဲ သူသသှေားခဲ့တယျ ။မောငျနှမတှဆေိုသူ့သတေမျးစာနဲ့ အမှတှေပေေးထားတာတှတှေရေ့တော့ အကွီးအကယျြဝမျးနညျးတော့တာ အရငျတုနျးကစိတျဆိုးခဲ့တာကိုတောငျ ပွနျပွီးစိတျမကောငျးဖွဈကွတယျ ။
အဲဒါဘာကွောငျ့လညျး တရားကွောငျ့ ဘုရားဟောတဲ့တရားတျောတှကေိုဆရာတျောက နားလညျလှယျအောငျ စကားရိုးရိုးနဲ့ တဆငျ့ပွနျဟောပေးသှားတာသူမသခေငျလေးမှာ ခဏ ခဏပွောသှားတယျ..ငါ ခုလိုစိတျမြိုးနဲ့သရေတာကနြေပျပါတယျ ။တသကျလုံးရခဲ့တဲ့ပစ်စညျးဥစ်စာတှဟော အခုအခြိနျမှာငါ့ကို ဘာကနြေပျမှုမှ မပေးနိုငျဘူး ။
ဒီလိုစိတျထားမြိုးနဲ့ ဒီလိုအသိဉာဏျမြိုးစောစောစီးစီးကတညျးကနနေိုငျခဲ့ရငျဘဝဟာ ပိုပွီးကနြေပျစရာကောငျးမှာပါ တဲ့ဘဝကို အကောငျးဆုံး ဘယျလိုနကွေမလဲ…..(ဆရာတျောဦးဇောတိက၏ အသကျရှငျနလေကျြဘဝသနေသေူ တရားတျောအား မှီငွမျးပါသညျ။)
သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ကြမယ့် အောင်လ နဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ စိတ်ထားကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ နံရိုးကျိုးသွားတဲ့ ပြိုင်ဘက်ဆီသို့ စာတစ်စောင်
Previous Article မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘာကြောင့် အဖူးအမြော်မခံတော့တာလဲ။ ယခု ဘယ်မှာသီတင်းသုံးနေတာလဲ သိချင်သူများအတွက်
Next Article နောက်ကျောတက် ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးပါ